Hal duuliye ayaa ku dhintay labana waa ku dhaawacmeen shil diyaaradeed
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Hal duuliye ayaa ku dhintay labana waa ku dhaawacmeen shil diyaaradeed
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Diyaaradaha T-38C Talon ee tababarka supersonic ee Saldhiga Ciidanka Cirka ee Laughlin
Matoorka mataanaha ah ee Northrop T-38 waa diyaaradii ugu horeysay ee dunidu tabobar heer sare ah, waxayna la shaqaynaysay ciidamada cirka Maraykanka tan iyo 1959kii.
Labo diyaaradood oo nooca US T-38C Talon ee tabobarrada ayaa ku lug lahaa 'shil diyaaradeed' oo ka dhacay dhabbaha ay diyaaraduhu ku ordaan. Saldhiga Ciidanka Cirka ee Laughlin, oo ku taal meel u dhow Del Rio, Texas oo u dhow xudduudda Mareykanka iyo Mexico, abbaaraha 10-ka subaxnimo xilliga maxalliga ah ee maanta.
Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Laughlin AFB, hal duuliye ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen ka dib markii uu shil ka dhacay dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan.
Hal duuliye ayaa isla goobta ku dhintay. Mid kale ayaa loo qaaday Xarunta Caafimaadka ee Val Verde ee Del Rio, waa la daweeyay oo la sii daayay. Duuliyihii saddexaad ee ku lug lahaa 'shilka' ayaa ku sugan xaalad halis ah, waxaana loo daadgureeyay Xarunta Caafimaadka ee Brooke Army ee San Antonio. Magacyadooda waa la qarinayaa inta laga wargelinayo qaraabadooda.
"Luminta saaxiibada kooxda waa xanuun aan la aamini karin, waana qalbi culus, waxaan ku muujinayaa tacsideyda daacadda ah," ayuu yiri Colonel Craig Prather, oo ah taliyaha 47-aad ee Tababarka Duulimaadka.
"Qalbigayaga, fikirradayada, iyo ducadayadu waxay la jiraan duuliyayaashayada ku lug leh xumaantan iyo qoysaskooda."
Matoorka mataanaha ah ee Northrop T-38 waa diyaaradii ugu horeysay ee tabobar heer sare ah oo caalami ah, waxayna la shaqaynaysay ciidamada cirka ee Maraykanka tan iyo 1959. Waxaa la qorsheeyay in lagu badalo diyaarada. Boeing T-7 Red Hawk wuxuu bilaabmayaa 2023.